Xiaomi na-ewetara okpu iji wusi ntutu | Akụkọ akụrụngwa
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Ngwa
Xiaomi mee ya ozo jiri ngwa elekere anya nke na-eju anya. Na Actualidad Gadget anyị na-eji ịnwale ụdị ngwa na ụdị ejiji. Mana ruo ugbu a anyị anụbeghị maka ya okpu nke na-eme ka ntutu dị ike. Xiaomi na-aga n'ihu na-emepụta ngwaahịa ọhụrụ nke na-eme ọtụtụ ihe na-ewu ewu.
La laghachi ọrụ na ụlọ ọrụ China, na-achịkwa ịkwalite mmụọ n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa ebe anyị ka na-ata ahụhụ ọnọdụ ndị a na-enwetụbeghị ụdị ya n'ihi COVID 19. Na kpọmkwem, ịlaghachi na mmepụta Xiaomi, kwa ejisie ike animate nke teknụzụ ubi ihe kachasị amasị anyị. Nke a, dị ka anyị na-ahụ, sụgharịrị n'ime ngwa ọhụrụ na nke ọhụụ.
1 Okpu iji kwụsị alopecia
2 Ihe mkpuchi Xiaomi na-enye teknụzụ iji melite ogo ntutu
3 Hazi na ime ihe
4 Mgbe ị ga-azụta okpu ntutu isi?
Okpu iji kwụsị alopecia
Ntutu ntutu dị na ejiji. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ọ bụ otu n'ime "arụmọrụ" kachasị achọ nke afọ 3 gara aga. Site na mmụba dị ukwuu na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. Ndị nwere nsogbu ntutu isi bụ ndị, site na ntinye aka dị mfe, nwere ike nwetaghachi ntutu ha yana ùgwù onwe onye ha.
Xiaomi abiara na ntinye ohuru maka ndị ahụ na-enweghị nsogbu enweghị ntutu mana na-achọpụta na ọ na-amalite ịda. Ngwaahịa na-enye ihe ohere nke ime ka ntutu dị ike ruo n'ókè nke ịkwụsị ntutu isi. Ọ na-eme ya n'echiche na n'ụdị nke anyị ahụbeghị ruo ugbu a.
Nke toro ogologo larịị nrụgide na anyị na-ata ahụhụ kwa ụbọchị, a Mkpụrụ ndụ ihe nketa enweghị ekele ma ọ bụ ọbụna nri na-adịghị mma nwere ike ime ka ntutu anyị ghara ịda mbà Meekwa ka ọ malite ịda Na-adabere Ngwa nke na enyere anyị aka ịkwụsị ntutu isi ahụ na-adịghị mma Na na ọ na-ewusi ntutu site na mgbọrọgwụ bụ ihe a ga-elebara anya na-esite na Xiaomi.
Ihe mkpuchi Xiaomi na-enye teknụzụ iji melite ogo ntutu
Ekele diri ndi LLLT laser teknụzụ, a kediegwu wearable awade a enwekwu ọganihu na ntutu. Ọ na-emekwa nke a site na iwusi follicles ọ bụla ike site na mgbọrọgwụ n'onwe ya. Dị ka ndị na-emepụta ya si kwuo, ọ dịla gosipụtara na 80,9% arụmọrụ dị mma. Laser nwere asambodo ahụike US ma ọ ga-echere nkwenye na mba ndị ọzọ. Nbanye ya na follicle n'ụzọ ziri ezi na-eme ka ọ sie ike megide alopecia.
Maka ozi, a na-ekewa irighiri ntutu isi n'ụzọ atọ; uto, oge mmebi na izu ike. Site na ihe nyocha laser 650nm nke ihe karịrị ndị dọkịta 3.000 nwalere ma enyere ya aka maka iji ụlọ, nwere ike n'ụzọ ziri ezi iru follicles n'etiti 3 na 5 mm ndị na-anọghị n'usoro uto, ma na ha ga-alaghachi n'ọnọdụ uto nkịtị.
Nkà na ụzụ a na-arụ a ọrụ dị mkpa iji mee ka ntutu dịkwuo elu ma kwụsị ntutu isi. Igwe ọkụ na-eme ka follicles na-ezu ike ma weghachite ndi na emebi. Mgbe ọgwụgwọ a «okpu» site na Xiaomi achọpụtala na a na-emegharị ha niile na-abanye na uto ọzọ dị ka ndị ọzọ nke ike follicles.
Hazi na ime ihe
Ngwa mma n'onwe ya abụghị okpu onwe ya. Kama, okpu ahụ nwere ike zoo ma ọ bụ zoo ụzọ ụfọdụ n'onwe ya. N'ezie ọ bụ obere okpu agha nke anyị nwere ike itinye n'ime okpu ọ bụla ọkọlọtọ size. Ihe mkpuchi 'okpu agha' a n'ezie ìhè dị arọ nke 210 grams Ọ ga-enye nsogbu mgbe anyị na-eyi ya n’isi anyị. Na ya akụkụ sitere na 203,3 × 178,7 × 87,6 mm.
Ọ bụ ezie na dị ka anyị na-ekwu, obere okpu agha nwere ike ịdaba n'ime okpu ọ bụla, Na ngwugwu anyị nwere okpu ojii nwere uche nke ọ dabara n'ụzọ zuru oke. N'ihi ya ị nwere ike iji ya ebe ọ bụla na-enweghị adọta uche maka iyi ihe dị iche n'isi gị. N'ime ọrụ ya anyị na-ahụ obere nsogbu isi nke ndị nrụpụta zọpụtara n'ụzọ kachasị mma.
Iji zere ibu dị arọ nke anyị ga-ebu n'isi anyị, enweghị batrị agbakwunyere. Ya mere, ka gi jiri anyị ga-achọ eriri USB. Ihe nwere ike belata oke ya. Ya mere, iji ghara iburu batrị dị arọ n'isi, ma ọ bụ chọọ njikọ USB mgbe niile, na ogbe anyị hụrụ batrị dị na mpụga. Yabụ, site na ijikọ eriri ahụ, anyị nwere ike iji ya ebe ọ bụla anyị nọ na-enweghị mkpa plọg. Ee, eriri ga-agba site na okpu na njikọta batrị ahụ, nkọwa zuru ezu nke na-eme ka eji ya eme ihe nwere ike ịdọrọ uche.
Ma ruo ole mgbe ka ị ga-eyi okpu? Ndị na-emepụta ya na-ekwu na anyị nwere ike iji laser maka 30 nkeji ụbọchị ọ bụla. Site na nnọkọ kwa ụbọchị nke ọkara otu awa, a ga-ahụta nsonaazụ ahụ n'oge na-adịghị anya. ama m wusi isi ala, kwụsị ntutu isi ma hụkwa uto ọzọ site na follicles ndị anaghị arụ ọrụ.
Mgbe ị ga-azụta okpu ntutu isi?
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ntutu isi ma ịnwalela ihe niile, ọ bụ ihe dị mma maka ngwa a iji dọta uche gị. Enwere ọtụtụ na ngwa dị iche iche nke Xiaomi na-ere. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ha nwere nnukwu afọ ojuju nke ndị ọrụ kọọrọ. Na karia ihe nile, ya na a mmekọrịta dị mma n'etiti ogo ngwaahịa enyere na ọnụahịa ahụ nke anyị nwere ike inweta ha.
A na-eme atụmatụ na n’ime izu ndị mbụ n’ọnwa Mee You nwere ike ịzụta ụfụ Xiaomi nke ga-ewusi ntutu gị ike ma gbochie ya ịpụ. Ndị na-emepụta ya na-ekwe nkwa nke ahụ n'ime ọnwa atọ a ga-enwe mmụba pụtara ìhè na uto ntutu. Ego ole ka ị ga-akwụ ụgwọ iji nwetaghachi ntutu isi na-enweghị ịwa ahụ?
Igwe Xiaomi ga-ere maka ihe na-erughị euro 200, a na-atụ anya na ọ ga-abịa n'oge na-adịghị anya na ọwa ahịa ndị ụlọ ọrụ na-adịbu. Kpamkpam otu nhọrọ ị ga-atụle ma ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị maka ntutu isi na ị erubeghị njikere ịga "nlegharị anya" na mpaghara ndị Turkish.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Xiaomi na-enye okpu iji wusi ntutu isi